Xiaomi Mi Note3သစ်သည်ကြီးမားသောမျှော်လင့်ချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် Androidsis
Xiaomi Mi Note3အသစ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောမျှော်လင့်ချက်များရရှိစေသည်
Xiaomi Mi Note အသစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာသေးမီရက်များအတွင်းကွန်ယက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ပေါက်ကြားမှုများကိုသိရှိပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုမျှော်လင့်နေပါသည်။ Xiaomi Mi Note3သည်ဈေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသောအင်အားအရှိဆုံးစမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်လာရန်ရည်ရွယ်သည်။ များစွာသောအရာများတွင်နံပါတ်တစ်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းစစ်မှန်သောထိပ်တန်း features တွေ။
သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုပြောင်းလဲရန်သင်စဉ်းစားနေပြီး Xiaomi ကိုသင်နှစ်သက်လျှင်မြန်မြန်မနေပါနှင့်။ ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် Xiaomi Mi 19 ၏စျေးနှုန်းများကိုသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တရားဝင်သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ မှန်သည်။ တရုတ်ဆော့ဖ်ဝဲအတွက်အလွန်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်စေပြီး၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Xiaomi Mi Note3အသစ်
ကျယ်ပြန့်စွာပြောရမည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်စမတ်ဖုန်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များဖြစ်လိမ့်မည်။ အလွန်အောင်မြင်သောပရိုဆက်ဆာ Snapdragon 835 ဒါဟာဒီအနာဂတ် Xiaomi နဂါးမှ«လှုပ်ရှားမှု»၏သူဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကအနည်းဆုံးကို run မယ်လို့ 2,4 GHz အမြန်နှုန်းနှင့် 1Gbps LTE ဆက်သွယ်မှု နှင့် virtual reality များအတွက်အကူအညီ။
အရွယ်အစားနှင့် / သို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်နှစ်မျိုးရှိမနိုင်ကိုမသိရှိရသေးသည့်တစ်ခုတွင်ပြောဆိုခြင်းရှိသည် 8GB RAM ပါ။ Xiaomi (ရှောင်မီ) သည် Mi Note3သစ်တွင်ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့်အရာများဖြစ်သည်။ 128GB သိုလှောင်မှု Mi Note3ကိုယခုအချိန်တွင်အရေးအပါဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်နှင့်ပတ်သက်။ ကြီးမားတဲ့နှင့်အတူကွေး panel ကို ၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင်။ ဒီရှုထောင့်မှာတော့သတင်းအများကြီးရှိပုံမရဘူး။ ဒါ့အပြင်အပေါ်ရေတွက် QHD resolution ယင်း၏အရင်လိုပဲ။ အဘယ်အရာကိုမျှမထင်ရှားရသေးဒီမျက်နှာပြင်ရပါလိမ့်မယ်ကာကွယ်မှုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
Xiaomi ၏ထုံးစံအတိုင်း၎င်း၏ဘက်ထရီသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကြီးမားလိမ့်မည်။ \_ t 4.070 mAh ဘက်ထရီ။ ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အရာကကျွန်ုပ်တို့အားတစ်နေ့လုံးအသုံးပြုရန်လုံလောက်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ထက်ပိုပေးသည်။ ငါအရမ်းကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုမှာ၎င်းသည်လျင်မြန်သောဘက်ထရီအားသွင်းမှုအသစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လျင်မြန်စွာအားသွင်း 4th.
ဤမျှလောက်ကတိပြုထားသည့်ဤ terminal နှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်အရာများစွာရှိသည်။ ၎င်းလွှတ်တင်မှုကိုယခုနှစ်လယ်မတိုင်မီမျှော်လင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကင်မရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေလည်းငါတို့မှာမရှိဘူး။ ပြီးတော့သူ့စျေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိသေးပါဘူး။ မင်းစောင့်နိုင်လား?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Xiaomi က » Xiaomi Mi Note3အသစ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောမျှော်လင့်ချက်များရရှိစေသည်
သူငယ်ချင်း၊ asus ar မှာ 8gb ram ပါဝင်ပြီးစွမ်းအားပြည့်ပရိုဆက်ဆာဖြစ်ပေမယ့်စျေးကနည်းနည်းကြီးတယ်။ စျေးနည်းနည်းပဲရမယ်ထင်တယ်။
ASUS တွင် 8 GB RAM ပါသောကြောင့်စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြည့်ရသည်မှာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော်လည်းအခြားစျေးနှုန်းချိုသာသောအခြားဖုန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်မြင့်မားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ကိုအသွင်သဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးပေးသော Apps ၂